चीनमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो छाल आउने चेतावनी ! « Online Tv Nepal
चीनमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो छाल आउने चेतावनी !
Published : 1 April, 2020 7:33 pm
चीनमा, कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ । चीनले आफ्ना शहरहरूबाट लकडाउन क्रमसै हटाउँदैछ । मानिसहरू बाहिर निस्कन थालेका छन्। जीवन सामान्य हुँदैगएको अनुभव चिनियाँहरुले गरिहेका छन । करीव ६० दिनपछि यी सबै प्रतिबन्धहरू हटाइनेछ । तर, चीनआ अझै ठूलो चुनौति रहेको वैज्ञानिकहरूले बताइरहेका छन । यो कोरोना भाइरस चीनमा पुन दोहारिने चुनौतीको सम्भावना ठूलो रहेको उनीहरुले चीनलाई चेतावनी दिइरहेका छन ।
बेन काउलिंलनले भने, ‘कोरोना भाइरस हुबेई प्रान्तको वुहानदेखि सम्पूर्ण चीन र त्यसपछि युरोपियन देश र अमेरिकामा फैलिएको छ। यातायात सबै दुनिया भरमा प्रतिबन्धित थियो। सीमाहरू बन्द गरिएका थिए । ‘ बेन काउलिंगले भने, युरोपको उपचारलाई हेर्दा, ‘उनले दुई वर्षसम्म कोरोना बिरामीहरुलाई अन्य मानिसभन्दा २ वर्ष अलग राख्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसो भएमा यी देशहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउन सक्नेछन्।’